Enweghi ike imegide | Martech Zone
Enweghi ike imegide
Na Mọnde, Nọmba 30, 2010 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Achọpụtala m ọtụtụ nsogbu m chọtara na azụmaahịa ike vesos agaghị. M hụrụ n'anya na-arụ ọrụ na ike. M asị na-arụ ọrụ na agaghị.
Enweghị ike nwere ike ịpụta ọtụtụ ihe. Enweghị ike nwere ike ịbụ n'ihi akụ, ụkpụrụ, agụmakwụkwọ ma ọ bụ ikike. Mgbe ị na-emezughị ihe mgbaru ọsọ n'ihi na ọ ike -eme, ị na-emezughị… ihe nwetara n'ụzọ. Ozugbo i wepụrụ ihe mgbochi ahụ, ị ​​ga-aga nke ọma.
Agaghị dị iche. Agaghị na-eduga na ọdịda. Agaghị na-eme n'ihi egwu, mpako, mpako, umengwụ ma ọ bụ nkwukọrịta. Agaghị pụtara na ihe mgbaru ọsọ ahụ kwere omume, mana onye nwetara n'ụzọ.
N'oge m bụ nwata dị ka njikwa, enwere m nsogbu mgbe niile na ajụjụ nke ike vesos agaghị mụ na ndị ọrụ m. Amaghi ma okwu a bu ike ma ọ bụ a agaghị mere ka m na onye ọrụ ahụ gwuo ala iji chọpụta ihe kpatara na anyị anaghị aga nke ọma.
Ọ na-eju m anya ịchọta ndị ọrụ chọrọ ịga nke ọma, mana enweghị ike n'ihi nnyonye anya nke ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ, ọ tụrụ m n'anya n'ihi na m bụ ihe n'ụzọ. Ozugbo anyị wepụrụ nnyonye anya ahụ, anyị na-enweta mmeri.
Mgbe emezughi ihe mgbaru ọsọ n'ihi agaghị, usoro ahụ dị nnọọ iche. Ndị a bụ ndị ọrụ e kwesịrị iwepụ n'ihi na ha bụ nnyonye anya na ihe mgbochi iji nwee ihe ịga nke ọma.
Akụkọ ahụ agbanweghị na ụlọ ọrụ. Enwere ụlọ ọrụ ike ndị ahụ bụ ezigbo ndị ahịa anyị. Anyị nwere ike inye ha akụrụngwa, atụmatụ na agụmakwụkwọ wee nyere ha aka ịkwụsị. N'ụzọ dị mwute, anyị na ụlọ ọrụ ndị zutere agaghị. ha agaghị ntị, ha agaghị gbanwee, ha agaghị tinye ihe ndi ozo di nkpa, ma obu ha agaghị n’ihi na ha chere na ha ma nke ọma.
We ike nyere ụlọ ọrụ aka agaghị.
Tags: azụmahịa na ndị ahịamgbasa ozi mba ụwaAkwụkwọ AhịaChọọ Marketinguberflip ehiwevideo ahịa ọnụ ọgụgụ